Uwe ime ime • Uwe • P & M ọkachamara nke komputa
Uwe ime akwa a raara ya nye ndi kacha ekpughere na ọnọdụ mpụga siri ike, dika okpomoku di ala, ikuku ma obu drafts. Ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa ahụ bụ akwa uwe na-ekpo ọkụ: T-shirts, uwe ime na usoro. Emere uwe ime ahụ na-eme ihe dịka ọ dabara adaba.
Uwe a haziri n'ụzọ dị otú a na-eme ka nnwere onwe ịgagharị na ọdịmma ka mma. Ekele maka atụmatụ ndị a, a na-eji ya ọ bụghị naanị na ọrụ, kamakwa site na ndị na-egwu egwuregwu oge oyi. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na-enye dị na asọmpi asọmpi n'ihi mmefu nke anyị nyere iwu na ụlọ ahịa anyị. Nchikota nke di elu na onu ahia mara nma na eme ka uwe ime di otua ma obughi nani ndi okacha amara.
Thermoactive uwe ime ahụ dabara nke ọma na ahụ
Uwe a na-ekpo ọkụ na-acha uhie uhie, uwe mwụda na uwe ogologo ọkpa
Ekike uwe ọ na-agbanwe nke ukwuu, dabara adaba na ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọdịdị ya dị mma nke na mgbe obere oge iyi ya, ị kwụsịrị inwe ya. Ihe na-agbanwe agbanwe na-ekwe nkwa nnwere onwe ịgagharị, na-egbochi ụjọ ụjọ ọ bụla. Otú ọ dị, ọrụ bụ isi nke uwe ime dị otú a bụ iji kpuchido ahụike na ahụ megide okpomọkụ dị ala na ahụ jụrụ.
Uwe ime akwa na-ahụ maka ngwa ngwa nwetara ndị nwere ọmịiko ya n'etiti ndị egwuregwu na ndị ọchụnta ego, a nabatara ngwongwo ya nke ọma, nke na-eme ka ọ mara ewu ewu. Ejikọtara ya na uwe ndị ọzọ dịka Uwe, eriri afọ ma ọ bụ Jaketị na-enye gị ohere ịhazi okpomọkụ nke anụ ahụ na ọnọdụ mgbanwe.
Ekike uwe ime thermoactive, nwa. PLN 38,69 nnukwu
Irè mwepụ mmiri dị irè
Uwe ime akwa emebere site na iji teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ha kachasị bụrụ ọrụ maka nkasi obi na-enweghị atụ. N'ihi mwepụ nke mmiri na akwa dị n'èzí, ọ zuru oke maka ọnọdụ ebe onye ọrụ gosipụtara ngosipụta ahụ ike.
A na-agba mmiri mmiri n'èzí, nke dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ. Irughari mmiri nke ọma na-ebelata ihe ize ndụ nke isi na-esi isi.
Idebe linen dị ọcha dị mfe, ọ dịghị achọ ụzọ ọ bụla pụrụ iche ma ọ bụ ndị ọrụ nhicha raara onwe ha nye, naanị soro iwu dị mfe na akara ngwaahịa gbasara ọnọdụ ịsacha.
Uwe mkpuchi ahụ, Brubeck ogologo ọkpa
ụmụ nwoke na-arụ ọrụ uwelinen akwaụmụ nwanyị uwe imeakpa akwa thermoactivethermoactive na-arụ ọrụ uwelinen ọrụ linenuwe ime thermoactive na-arụ ọrụ